ESI LELEE OZI EHICHAPỤ VKONTAKTE - VKONTAKTE - 2019
Ụzọ na-ele mkparịta ụka na-eme mkparịta ụka VKontakte
N'ihi n'eziokwu na ozi ọ bụla na netwọk mmekọrịta dị na VKontakte nwere ike iji ma ọ bụ na-ehichapụ ya na mberede, nlele ya agaghị ekwe omume. N'ihi nke a, ọ na-adịkarị mkpa iji weghachite ozi ezitere ozugbo. N'okpuru isiokwu a, anyị ga-atụle ụzọ maka ịlele ọdịnaya site na ozi ụlọ ọrụ.
Lelee ozi ntanetị anya na VK
Ruo ugbu a, nhọrọ niile dị ugbu a iji weghachite akwụkwọ ozi VK iji lee ozi nwere ọtụtụ ụda. Ọzọkwa, n'ime ihe ka ukwuu n'ime ọnọdụ, ịnweta ọdịnaya site na nkwarịta ụka ahụ bụ otu akụkụ ma ọ bụ ihe agaghị ekwe omume. A ghaghị iburu nke a n'uche tupu ịmalite ịmara ya na ntuziaka ndị sochirinụ.
Hụkwa: Otu esi ehichapụ ozi VKontakte
Usoro 1: Weghachite nkwurịta okwu
Ụzọ kachasị mfe ịlele ehichapụ ozi na ozi akwụkwọ bụ iji weghachite ha site n'iji ngwaọrụ netwọk mmekọrịta. Anyị na-atụle ụzọ ndị dị otú a site na otu isiokwu dị iche na saịtị ahụ n'okpuru njikọ ahụ. N'ime ụzọ niile dịnụ, a ga-akwụ ụgwọ anya karị maka usoro izipụ ozi sitere na mkparịta ụka ahụ site n'aka onye na-akpọ gị.
Rịba ama: Ị nwere ike weghachite ma lee ozi ọ bụla. Ma ọ bụ na mkparịta ụka onwe onye ma ọ bụ mkparịta ụka.
Gụkwuo: Ụzọ iji weghachite nkwurịta okwu ehichapụ VK
Usoro 2: Chọọ na VKopt
Na mgbakwunye na usoro ọkọlọtọ nke saịtị nke netwọk mmekọrịta, ị nwere ike ịnweta ndọtị pụrụ iche maka ihe nchọgharị Ịntanetị kachasị ewu ewu. Ntugharị VkOpt nke ọhụrụ na-enye gị ohere iji weghachite ọdịnaya nke ozi na-ehichapụ ozugbo. Ịdị irè nke usoro a na-adabere na oge nhichapụ nke mkparịta ụka.
Rịba ama: Ọbụna atụmatụ ntanetị nwere ike ịmecha mezue.
Download VkOpt maka VKontakte
Ibudata ma wụnye ndọtị maka ihe nchọgharị Ịntanetị. N'ọnọdụ anyị, a ga-egosipụta usoro mgbake ahụ naanị na ihe atụ nke Google Chrome.
Mepee ebe nrụọrụ weebụ na ịkparịta ụka n'Ịntanet VKontakte ma ọ bụ mee ka ọ dị ọhụrụ ma ọ bụrụ na ị mezigharịrị tupu ịwụnye ndọtị ahụ. Ọ bụrụ na echichi ahụ nwere ihe ịga nke ọma, akụ ga-apụta n'akụkụ foto ahụ n'akụkụ aka nri.
N'iji isi ihe nke akụ na ajụjụ, gbanwee na ibe "Ozi". Mgbe nke ahụ gasịrị, n'elu akụkụ nke ala ahụ, kpoo òké ahụ n'elu akara ngosi.
Site na ndepụta e nyere, họrọ "Chọọnụ ehichapụ ozi".
Mgbe ị na-ebu ụzọ mepee nhọrọ a mgbe ị na-ekenye ngalaba "Ozi" ihe nwere ike ị gaghị efu. Ị nwere ike idozi nsogbu ahụ site na ịpịgharị òké n'elu akara ngosi ma ọ bụ site na imelite ibe.
Ozugbo o jiri ihe ahụ a kapịrị ọnụ, windo gbara gburugburu ga-emepe. "Chọọnụ ehichapụ ozi". N'ebe a, ị kwesịrị iji nlezianya mara onwe gị na atụmatụ nke mgbake ozi site na usoro a.
Tinye akọrọ "Gbalịa weghachite ozi"ịmalite usoro nke ịgụ isiokwu na iweghachi ozi niile maka oge ọzọ. Usoro nwere ike iwe oge dị iche, dabere na ọnụ ọgụgụ zuru ezu nke ozi ehichapụ na ozi ndị dị.
Pịa bọtịnụ ahụ "Chekwa na faịlụ (.html)" ibudata akwụkwọ pụrụ iche na kọmputa.
Zọpụta faịlụ ikpeazụ site na windo kwesịrị ekwesị.
Iji lee akwụkwọ ozi ahụ, nke weghachite iji weghachi, mepee akwụkwọ HTML ebudatara. Ị ga-eji ihe ọ bụla dị mfe ma ọ bụ ngwanrọ na-akwado usoro a.
Dịka ọkwa banyere ọrụ nke ọrụ VkOpt a, n'ọtụtụ ọnọdụ ozi dị na faịlụ ga-agụnye aha, njikọ na oge eziga ozi. N'okwu a, ọ bụghị ihe odide ahụ ma ọ bụ onyinyo ahụ dị na mbụ ya.
Otú ọ dị, ọbụna na nke a n'uche, ụfọdụ ozi bara uru ka dị. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịnweta akwụkwọ, foto, ma ọ bụ mụta banyere omume ndị ụfọdụ na-eme na mkparịta ụka dịpụrụ adịpụ.
Rịba ama: Ọ gaghị ekwe omume iweghachite akwụkwọ ozi na ngwaọrụ mkpanaka. Nhọrọ niile dị, gụnyere ndị anyị na-atụghị anya na nke kachasị dị irè, na-adabere na saịtị zuru ezu.
N'ileba anya na uru na ntughari nke usoro, o kwesighi inwe nsogbu na ojiji ya. Nke a na - emechi ohere niile VkOpt gbasara gbasara isiokwu nke isiokwu a, ya mere anyi mezue ntụziaka.
N'ihi nyocha zuru ezu nke ntụziaka anyị, ị nwere ike ịlele ọtụtụ ozi na nkwupụta VKontakte nke ehichapụrịrị maka otu ihe ma ọ bụ ihe ọzọ. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ndị a na-ahụghị n'oge isiokwu ahụ, biko kpọtụrụ anyị na ihe ndị ahụ.